Ndụmọdụ na ntuziaka maka etu esi amalite azụmaahịa | ECommerce ozi ọma
La ịrị elu na-achọ na e-azụmahịa akwalitewo ike e kere eke nke obere na ọkara, Ọ dị mkpa ịnwe ihe ndị dị mkpa anyị ga-atụ aro ebe a ka ị nwee ike wepu azụmahịa gị ka ọ kwesịrị ịdị na Ndụmọdụ na ntuziaka maka ịmalite azụmaahịa.
Bido ahụmahụ bara ụba nke ijikwa ụlọ ọrụ, O nwere ike imeri ma mepụta ụdị obi abụọ ọ bụla, mana ọ bụrụ na ịnwere ihe ị chọrọ iji mepụta ma chọọ inye ya nduzi, gaa n'ihu na-agụ obere ndu a iji nweta ya.
1 Isi ihe dị mkpa iji jikwaa mmepe ụlọ ọrụ bụ:
2 Kedu ihe bụ:
3 Usoro imepụta ya
4 Kedu atụmatụ azụmahịa?
4.1 Họrọ ebe kwesiri ekwesi
4.2 Iwu iwu nke ụlọ ọrụ
4.3 Usoro ndị achọrọ iji bido azụmahịa bụ ihe ndị a:
5 Kedu otu esi enweta ego iji bido azụmahịa gị?
6 Mgbasa ozi
Isi ihe dị mkpa iji jikwaa mmepe ụlọ ọrụ bụ:
Tupu ịmalite, ị kwesịrị iburu n'uche na urzụ ahịa azụmaahịa ga-eso gị mgbe niile iji nwee ọganiihu. na isi bụ ịmepụta ụlọ ọrụ, nke ị nwere ike iwebata echiche gị ma nweta uru bara uru na ha.
Ibido ụzọ azụmaahịa ọhụụ anaghị adị mfe, mana ọ bụghịkwa nnukwu ọrụ, ị ga- eme gbalịsie ike ma debekwa ebumnuche dị mkpirikpi, ka ha wee rụọ ọrụ dịka afọ ojuju onwe onye na ọganihu azụmahịa.
Ọ dị ezigbo mkpa na ịmara ihe niile banyere SME, ebe ọ bụ na, dị ka onye ọchụnta ego ma bido ịmalite azụmahịa ụwa, ị ga-amalite ịtọlite ​​obere ụlọ ọrụ obere ma ọ bụ ọkara dabere na isi obodo gị na nzukọ ị na-enye ya. Ọ bụrụ n’ị na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị iji hụ na ihe niile na-aga nke ọma, ị nwere ike bulie ụlọ ọrụ gị ka ị cheghị n’echiche.
Kedu ihe bụ:
Iji malite ọrụ, ị ga-ama nke ahụ ihe SME dị ka ịtọ nkume mbụ na ụwa nke azụmahịa nke ụlọ ọrụ, SME pụtara ụlọ ọrụ Obere na Ọkara, nke gụnyere ụlọ ọrụ ndị ahụ na-amalite ito eto ego na akụ na ụba mmadụ.
Obere ụlọ ọrụ ndị nwere ihe na-erughị ndị ọrụ 50 na ụgwọ ọrụ hayana a olu ere na-erughị nde euro 10,
Mgbe a na-atụle ụlọ ọrụ dị ọkara mgbe o nwere ihe na-erughị ndị ọrụ 250 na oke mkparịta ụka nke ihe na-erughị nde euro 50.
La microenterprise nke sitere na mba anyị bụ nke nwere ihe na-erughị ndị ọrụ 10 na ọnụ ahịa ire ere nke na-erughị nde euro 2.
Usoro imepụta ya
Ihe kwesiri iburu n'uche bu na ndi mmadu na ebido oru ha n'emeghi ka ha buru uzo ahia ha zuru oke. Mbo mbuli a Companylọ ọrụ ọhụrụ na-agbasi mbọ ike na ọrụ gara aga iji hụ ọdịnihu nke azụmaahịa ahụ.
Nke mbu, ihe nile bu ihe amuru site na echiche, ịmalite azụmahịa ọ dị mkpa ka o doo anya banyere nzube nke azụmahịa ahụ, echiche nke na-enye anyị ohere ịmalite ọrụ akụ na ụba nke nwere uru n'ezie na-ewetara anyị uru bara uru.
N'ihi otu ihe a, anyi aghaghi ichoputa atumatu ahia nke na emeputa atumatu nke ulo oru anyi, ahịa nke ọ ga - ahụ onwe ya, asọmpi ya na ụfọdụ amụma akụ na ụba nke na - enyere anyị aka ịhụ ntakịrị ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ọzọ anyị ga - enwe.
Kedu atụmatụ azụmahịa?
Atụmatụ a ga-enwerịrị ozi niile dị mkpa gbasara ụlọ ọrụ na ebumnuche ya Ihe ebumnuche iji mezuo, na nkenke, ọkara na ogologo oge, na okwu ole na ole bụ ichikota otu anyị ga-esi hazie ụzọ ọrụ na iduzi azụmaahịa.
Họrọ ebe kwesiri ekwesi
Ahịa, chọta ebe dị nso na ebe ndị ahịa anyị nwere ike ịnọ, n'ihi na ebe kachasị mma na mpaghara ebe ọ na-enweghị onye ga-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị bara uru ọ bụla.
AsọmpiMgbe ụfọdụ ọ dị mma ma nyere aka ịbawanye ahịa n'ihi na ndị mmadụ nwere ike ịtụnyere ọnụahịa ma nwee ike ịhọrọ nke ka mma.
Mgbazinye mgbazinye, A gharịrị ịtụle ya na ego dị mma na nke a na-eme ka mmepe nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ nkwụsị ya na-akwado.
Iwu iwu nke ụlọ ọrụ
Iji malite azụmahịa gị ọ dị mkpa iji mepụta usoro iwu obodo, nke bụ nhọrọ nke usoro iwu a ga-ahọrọ iji mepụta ụlọ ọrụ ahụ.
Usoro ndị achọrọ iji bido azụmahịa bụ ihe ndị a:
Arịrịọ maka ọjọọ asambodo nke aha.
Ego mbata na asambodo nke Ngwaahịa Callable.
Kwụ ofgwọ nke Taxtụ Isi Na-enyefe Aka na Iwu Iwu Akwụkwọ
Arịrịọ maka Usoro Ndenye Akaụntụ Taxtụ (CIF).
Mgbakwunye na Social Security ma dịka ụlọ ọrụ na ndị ọrụ.
Nnweta na nkwado iwu nke akwụkwọ ndị ọbịa.
Ndebanye aha na Mercgbè Mercantile Society.
Nweta CIF ikpeazụ.
Legalization nke akwụkwọ gọọmentị.
Debanye aha maka Activtụ Isi Na-eme Ego.
Mee nkwupụta ọnụọgụ.
Nkwurịta okwu banyere oghere nke thelọ Ọrụ.
Akwụkwọ ikike nke ọchịchị obodo, ikike mmeghe na ikike ọrụ.
Debanye aha ụlọ ọrụ ahụ na Register of Establishments.
Kedu otu esi enweta ego iji bido azụmahịa gị?
Nweta ego ịchọrọ iji bido ọrụ gị Ọ dị mkpa inwe ike ịmalite ọrụ akụ na ụba. Oge ụfọdụ, ọ na-esi ike ịnweta ego dị mkpa iji bido azụmaahịa. Ihe mere Uzo mkpirisi iji nweta ego dị mkpa iji malite ọrụ azụmahịa gị, na-enweghị ịbanye n'ọtụtụ nsogbu.
Iji mezuo nke a, enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị ego maka ụlọ ọrụ gị nke na-enye ohere iji nweta isi obodo dị mkpa iji malite ụlọ ọrụ ọhụrụ.
The Directorate General maka ụlọ ọrụ na SMEs na-eme mmemme na nkwado ndị a nye onye ọ bụla iji mee ka usoro a dị mfe maka ndị ọchụnta ego ịchọta ụzọ ndị ọzọ a ga-esi nweta ego:
Nke a General Directorate na-enye aka na nkwonkwo kwa afọ, nke ahụ na-enyere ndị ọchụnta ego na ngalaba ahụ nkwado ma ọ bụ na-enweghị atụ.
Ọ na-enyekwa ego a ọrụ ndụmọdụ maka uto azụmaahịa site na EOI Foundation nke Ministry of Economy, Industry and Competitiveness.
N'otu ụzọ a Directorate of Industry and SMEs na-enye ndị na-achụ nta ego na ngalaba ahụ ego ndị sitere n'aka National Innovation Company, Enyere ENISA ego mbinye ego na-enweghị ọmụrụ nwa iji kwado ọrụ.
Mgbe ịmechara ihe niile a kwuru, ọ bụ oge kpọsaa azụmahịa ọhụrụ gị site na ịntanetị.
Ọ dabara nke ọma ịkwalite onwe gị na ụwa ịntanetị dị mfe ma dị ọnụ ala karịa anụ ahụ. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịdebanye aha na ịkwụ ụgwọ iji chọọ isiokwu ahụ na isi engines na akwụkwọ ndekọ aha, dị ka Google, Yahoo! na Bing.
O doro anya na netwọkụ mmekọrịta na-arụ ọrụ kachasị na mgbasa nke azụmahịa gị. Inwe nnukwu ìgwè nke ndị na-eso ụzọ na-eguzosi ike n'ihe nye akara gị, ị ga-agbaso usoro mgbasa ozi nke na-enye gị ohere ịmeziwanye mgbe niile. Ihe atụ nke a bụ Facebook, Instagram, Twitter na Pinterest, bụ ndị kacha eleta ugbu a.
Na mgbakwunye na ịkwalite onwe gị n'ụzọ dị otú a, enwere ụzọ ndị ọzọ maka mee ka ntanetị azụ ahịa ndị ahịa na-abawanye, ihe atụ nke a bụ Google AdWords, a ọhụrụ n'elu ikpo okwu na-enye gị ohere ịkpọsa gị ụlọ ọrụ na Google, Idodi na-amụba online ahịa. A na-akwụ ụgwọ ọrụ a naanị mgbe ndị ahịa nwere ike pịa na mgbasa ozi gị iji gaa na saịtị ahụ.
N'ụzọ dị otu a, ị nwere ezigbo nkọwapụta gbasara ihe ị ga-ahụchalụ tupu ịmalite njem gị n'okporo ụzọ azụmaahịa, nwee obi ike ịtụkwasị obi na nrọ na echiche gị mgbe niile, na-enweghị ike mezuo n'ihi enweghị ozi, isi obodo y mkpaliỌ bụrụ na ijikọ 3 ndị a, ị ga-enwe ike ịme ihe ọ bụla n'ihu ụlọ ọrụ gị, na-eru ọkwa ndị ị na-echeghị na ọ ga-abụ eziokwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Ndụmọdụ na ntuziaka maka etu esi amalite azụmaahịa